Ithimba lokuhlela | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Absolut Viajes iwebhusayithi ye-Actualidad Blog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe ku- umhlaba wokuhamba futhi kuyo siphakamisa izindawo zokuqala lapho sihlose ukuhlinzeka ngalo lonke ulwazi nezeluleko mayelana nokuhamba, amasiko ahlukahlukene omhlaba nokunikezwa okuhle kakhulu nemihlahlandlela yezivakashi.
Ithimba lokuhlela le-Absolut Viajes lakhiwa izihambi ezinothando nama-globetrotters azo zonke izinhlobo bayakujabulela ukwabelana ngolwazi lwabo nolwazi lwabo nawe. Uma futhi ufuna ukuba yingxenye yawo, unganqikazi sibhale ngaleli fomu.
Ngineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sobungcweti emhlabeni wezokuvakasha, yona leyo ebengifunda izincwadi futhi ngivakashela izindawo ezinhle emhlabeni wonke.
Ngiyakuthanda ukuhamba, ukwazi ezinye izindawo, njalo kuhambisane nekhamera enhle nencwajana yokubhalela. Unentshisekelo ikakhulu ekwenzeni uhambo olusebenzisa kakhulu isabelomali, futhi ugcine nokonga lapho kungenzeka.
Ngenkathi ngisemncane ngathatha isinqumo sokuba yintatheli, ngangikhuthazwa kuphela ukuhamba, ukuthola izindawo, amasiko, amasiko, umculo ohlukile. Ngokuhamba kwesikhathi sengifinyelele uhhafu walelo phupho, ukubhala mayelana nokuhamba. Futhi yilokho kufunda, futhi kimi ngitshela, ukuthi zinjani ezinye izindawo yindlela yokuba lapho.